Ukuvuselelwa kabusha kwe-neuropsychological. Ngabe iyasebenza ne-sclerosis yesibili eqhubekayo? - Ukuqeqeshwa kwengqondo
Ukuvuselelwa kabusha kwe-neuropsychological. Ngabe iyasebenza ne-sclerosis yesibili eqhubekayo?
Ulapha: Ikhaya » Ochwepheshe » Izihloko » Ukuvuselelwa kabusha kwe-neuropsychological. Ngabe iyasebenza ne-sclerosis yesibili eqhubekayo?
Ukuvuselelwa kwe-Neuropsychological ku-sclerosis eminingi akusona isihloko esisha kithi. Isibonelo, sikhulume ngabambalwa izindlela zokuvuselela kulo mongo. Kodwa-ke, ucwaningo luvame ukugxila kubantu abanendlela yokuphinda bakhiphe i-sclerosis eminingi noma bangacacisi ukuthi isampula likhethwe kanjani. Ekucwaningeni kodwa esikhuluma ngakho namhlanje, nokho izazi zigxile kuzo ifomu lesibili eliqhubekayo futhi babefuna ukuvivinya a ukwelashwa okwenziwa ngamakhompiyutha kugxile ezizindeni ezahlukahlukene zokuqonda.
Kulolu cwaningo, iqembu labantu abangu-36 abane-sclerosis eqhubekayo ehlukene lahlukaniswa laba ngama-subgroups ayi-2:
Iqembu lokuqala (abantu abangu-19) belashwa ngamaviki ayisishiyagalombili (izikhathi ezi-8 emizuzwini engama-3 isonto ngalinye) lapho kwaqeqeshwa khona izakhi zobuchopho ezahlukene njenge ukunakwa nokunaka, ukunakwa okuhlukanisiwe, inkumbulo ebonakalayo, inkumbulo yomlomo, ukucabanga okunengqondo nemisebenzi yesikhundla.
Iqembu elingaphansi lesibili (abantu abayi-17) esikhundleni salokho belawulwa ukwelashwa okulawulwa (isb. Uchungechunge lokuzivocavoca, lwesikhathi esilingana nesesiqumbi sokuhlola, ngombono wokuthi kulokhu akufanele babe nemiphumela ebalulekile), ngokwesibonelo ukusetshenziswa kwamaphazili ukuphindisela noma imibhalo ukufunda nokuqonda.
Bonke ababambiqhaza, ngaphambi nangemuva kokwelashwa, bahlolwa ngebhethri elifushane le-neuropsychological elalisetshenziswa kabanzi emgomeni we-sclerosis amaningi, i-BICAMS, ngokufakwa kwesikali sokudangala (BDI-FS), ukukhathala (MFIS) ) kanye nekhwalithi yempilo (EuroQol EQ-5D), konke ngenhloso yokubheka imiphumela yokuqeqeshwa nokuqhathanisa izingqimba ezimbili.
Ngokuqhathanisa ama-subgroups amabili ekugcineni kwesikhathi sokuvuselelwa kwe-neuropsychological, kuvela ukuthi abantu abathola ukuqeqeshwa ngekhompyutha bakhombise ukwanda okukhulu kakhulu kunabanye abantu inkumbulo ngamazwi, inkumbulo ye-visuo-spatial e isivinini sokusebenza. Ngaphezu kwalokho, abantu abafanayo bakhombise izinzuzo ngaphezulu kwezabo ithoni yemood, ku- wabona ukukhathala kanye nokwakhe izinga lempilo.
Kufanele wengezwe ukuthi kukho konke ukuhlukahluka okubhekwayo imiphumela yabonakala inkulu kakhulungakho-ke kubonisa ukuhambisana okukhulu kwemitholampilo yale miphumela.
Ngokwemininingwane yalolu cwaningo kubonakala sengathi nabantu abane-sclerosis eqhubekayo eqhubekayo bangazuza ekwelashweni okwenziwa ngekhompyutha. Le ndlela yokwelashwa inenzuzo ebalulekile yokuthi ukwazi ukusetshenziswa ekhaya leziguli futhi ngaphandle kobungcweti, okwenza konke kushibhile futhi kube lula ukufeza.
UMessinis, L., Kosmidis, MH, Nasios, G., Konitsiotis, S., Ntoskou, A., Bakirtzis, C.,… & Malefaki, S. (2020). Ngabe iziguli zesekondari ezithuthukayo ze-Sclerosis ziyasizakala ekulungisweni kwengqondo okusekelwe kwikhompyutha? Isilingo esilawulwa ngokungahleliwe. I-Multiple Sclerosis kanye nokuphazamiseka okuhlobene, 101932.
ukusilela kwengqondo ku-sclerosis eminingi, ukuvuselelwa kokusilela kokuqonda kokuqina kwe-sclerosis eminingi, ukuvuselelwa kwe-neuropsychological multiple sclerosis, multiple sclerosis
Ukuvuselelwa kabusha kwe-neuropsychological. Ngabe iyasebenza ne-sclerosis yesibili eqhubekayo?2020-02-052020-02-22http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngUkuqeqeshwa kwengqondohttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/02/riabilitazione-neuropsicologica-computerizzata-in-sclerosi-multipla-secondariamente-progressiva.png200px200px
Ukuphazamiseka kolimi kubikwe iziguli eziningi ze-sclerosisImibhalo, Ulimi, i-Neuropsychology, i-Multiple Sclerosis
Ukuphazamiseka kwengqondo okuphezulu okungahle kube khona kanye nokufunda okuthileImibhalo, i-DSA, i-DSA, ubuhlakani, i-Neuropsychology